Axmed Madoobe oo ka hadlay dagaalada maalmihii ugu dambeysay ka dhacay magaalada Gaalkacyo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Axmed Madoobe oo ka hadlay dagaalada maalmihii ugu dambeysay ka dhacay magaalada Gaalkacyo
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dagaalka soo noq-noqodka leh ee aan dhamaanayn ee ka soconaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kaas oo u dhaxeeya ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug.
Axmed Madoobe ayaa marka hore sheegay in mudadii ay dagaaladaasi ka soconayeen magaaalada Gaalkacyo ay geysteen dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dad shacab ah iyo dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay.
Wuxuu Axmed Madoobe ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo dagaaladaas islamarkaana loo turo shacabka fara-ku-tiriska ah ee ku haray magaalada Gaalkacyo oo dhibaatada ugu badan iyaga soo gaareeyso.
Sidoo kale, Axmed Madoobe ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in heshiiskii lagu gaaray magaalada Abuu Dhabi ee dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta la fulin waayo, islamarkaana lagu dul-dagaalamo dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
“Dagaalada ka soconaaya Gaalkacyo dhibaato badan ayuu geystay, waxaa ku geeriyooday dad shacab ah oo aad u badan iyo dhinacyadda dagaalada ka dhaxeeyay, balse waxaan si aad ah uga xumahay in heshiiskii aan u tagnay dalka Imaaraadka ay fulin waayaan hogaamiyaasha Galmudug iyo Puntland, waxaana sidoo kale wax laga xumaado ah in lagu dul dagaalamo dad rayid ah oo aan waxba galabsan, islamarkaana laga barakiciyo guryahooda” Sidaasi waxaa yiri Axmed Madoobe.
Dhinaca kale, Axmed Madoobe ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha Puntland iyo Galmudug inay si deg deg ah ay u dhaqan geliyaan heshiiskii Imaaraadka ay ku galeen, islamarkaana ay ka shaqeeyaan joojinta dagaalada iyo colaadda ka taagan Gaalkacyo.
“Waxaan madaxda Galmudug iyo Puntland ugu baaqayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u dhaqan geliyaan heshiiskii ay ku saxiixeen dalka Imaaraadka Carabta, maxaa yeelay meesha wax ku dhamaanayo waa dad rayid ah, oo haatan u barakacay duuleedka Gaalkacyo, waa in dadkaasi loo naxaa oo laga shaqeeyaa nabadda” Ayuu Axmed Madoobe hadalkiisa raaciyay.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa imaanaya xilli magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhaxeeysa ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug.